Guntunni durbaa akka hin guddanne gochuun maaliif? - BBC News Afaan Oromoo
Ijoollee durbaa ol-adeeman haaluma guddataa dhufaniin jijjiramni qaamaa fi yaada mul'achuun kan umamaan jirudha.
Haata'u malee, hawaasni tokko tokko keessatti haadhooliin ijoolleen dubara isaanii tutuqqaa saalaa irraa ittisuudhaaf jecha dubarri harma biqilishuunshee akka dafee hinmullanneef yaalii adda adda yoo taasisan mul'atu.
Yaaliiwwan taasifamane keessaa harma guntutaa jiru waan ho'aadhaan sukumuun (kaawuyyeessuun) guddina dhorkuun tokko.
Gochi akkanaa kunis biyyoota Lixa Afrikaa tokko tokko keessatti baramaadha.
Gocha kanas hambisuurratti hubannoo cimsuun qaama sirna barnootaa dirqamaa taasisuu akka qabu UK'tti Gamtaan Barnoota Biyyaalessaa beeksiseera.
Miseensa Mana Maree Warra Konservaatiivii kan ta'an Niikii Morgaan akka jedhanittis barsiisonnis "ga'ee guddaa taphatan waan qabaataniif" barsiifamuu qabu.
Waajira Dhimmoota Nageenyaa biyyattii 'The Home Office' jedhamu yaaddoowwan jiran gabaasuu/beeksisuudhaaf barsiisonni ga'ee qabu jedha.
Ganda Sudaan kittaannaa dubartootaa hambiste
'Boo'uun hin hayyamamu'
"Kinaayaa" - kan maqaa ishee nuti jijjiirre - UK keessa jiraatti.
Maatiin ishee sairiin isaanii Afrikaa Lixaa irraa dhufan. Afrikaa Lixaatti ammoo harmi akka dafee hin guddanne gochuudhaaf wantota ho'aa ta'aniin sukkuummachuun kan baramedha. Dubartiin kunis umurii waggaa 10 irraa kaastee shaakala kana keessa dabarte.
Akka isheen jettutti haati ishee "Yoo ani harma koo dhagaa ho'aan hin cunqursiin (kaawuyyeeffachu) ta'e, dhiironni anatti siquudhaan saal-qunnamtii na waliin raawwachuu jalqabu," jetti turte.
Yeroo baayyee kan harma ijoollee durbaa kaawuyyeessu haadhadha. Kaawuyyeessuun ykn akka harmi dafee hin guddane kan taasifamus dhakaa ykn fallaana sibiilaa barbadaa ibiddaan erga ho'isanii booda harma irra kaa'anii hanga inni lallaafutti gadi qabanii sukkuumuudha.
Kun kan ta'u ji'ootaaf walitti fufinsaan.
"Dhukkibbiin isaa yeroo hundaa ana keessaa hin badu," jechuun ibsiti Kinayaan.
"Boo'uudhaafillee siif hin hayyamamu. Akka waan maatii keetti qaanii guddaa fiddeetti waan ilaalamuuf akka 'dubartii cimtuutti hin ilaalamtu',".
Goodayyaa suuraa Kinayaafi haadha ishee
Kinaayaan yeroo ammaa mucaa intalaa kan ofiin deesse qabdi.
Yeroo inalli ishee kan angafaa umuriin ishee waggaa 10 ga'u, haati ishee akka isheen harma ishee kaawuyyeeffattuuf yaada dhiyeessite.
"Ani garu, gonkumaa hin ta'u jedheen dide. Ani ijoolleen koo tokkollee dhukkubbii hamaa ani keessa darbe keessa akka darban hin barbaadu. Ani hanga ammaatti dhukkubbii yeroo sana ture nan yaadadha."
Yeroo sana irraa kaastee ijoollee durbaa ishee osoo ani hin beekiin shaakala hama guddina dhowwuuf sukkuumuu kana irratti na jalaa raawwachuu malu jettee maatii ishee dhiistee baqatte.
Goodayyaa suuraa Ijoollee durbaa erga harma waan ho'aan sukkuummattee booda sabbataan hidhattee jirtu
UK keessatti ijoolleen durbaa 1,000 ta'an shaakala waan ho'aan sukkuumuun harmi akka hin guddanne dhowwuu kanaan miidhamaniiru.
Yeroo hubannoon dubartoota kittaanuu irratti dabalaa deeme kanatti, barmaatileen harmi akka hin guddane taasisuuf waan ho'aan sukkuummachuu kan garuu nama muraasa qofaatu beeka.
Pirezedaantiin Yuniyeenii Barnoota Biyyaalessaa Kirii Tunks, barsiisonni keessattuu ammoo barsiisonni Jajjabina Qaamaa/Ispoortii, akkamitti akka mallattoowwan barmaatilee kana adda baafachuu itti danda'an irratti barachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.
Kana malees, akkuma kittaanaa dubartootaa hambisuu irratti tasifame manneen bvarnootaa sadarkaa lamaffaa keessatti akka qaama barnoota dhimma saal-qunnamtiitti dirqama ta'ee kennamuu qaba jetti.
Goodayyaa suuraa Dhakaa ittiin harma sukkuuman
Harma kaawuyyeessuu ilaalchisee yakki adda ba'ee beekame hin jiru, garuu 'Home Office' akka yakka daa'iman irraan ga'aa jirutti ilaaluudhaan seerawwan yakkaa waliigalaa jalatti ilaalamuu qaba jedha.
Ogeettiin Narsii Angie Marriott akka jettutti gabaasni guutuun waan hin jirreef shaakalli harma akka dafee hin guddanne taasisuudhaaf waan ho'aan sukkuumuun UK keessatti hangam akka ta'e baruun rakkisaadha. .
"Dhimma sodaatamaa, yakka dhokataa" jechuun ibsaa "hawwaasa keessatti loogiin nurra ga'a" sodaa jedhuun dubartoonni dhimma kana irratti hin dubbatan jetti.
Goodayyaa suuraa Angie Marriott
Dubartiin Simone jedhamtu ammoo godaannisa barmaatilee kanaa waan qabduuf, yakka akkasii kana irratti akka hubannoon cimu hojjetti.
"Salphaadhumatti, shaakalli kun miidhaa geessisuudha."